တွံတေးသိန်းတန် | Myanmar Mp3 Album | Page 2
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / တွံတေးသိန်းတန်
Category Archives: တွံတေးသိန်းတန်
Tun Tay Thein Tan
တွံတေးသိန်းတန် – ရွှေသရဖူ (၁)
၀၁။ စိမ်းပြင်ပြင်စိမ်း ၀၂။ လေးဆယ်ကျော်အချစ် ၀၃။ ငှက်ခါးမလေးပြန်လာပါ ၀၄။ စိမ်းသရဖူစိမ်း ၀၅။ ခွေးဖြူမသို့စာတစ်စောင် ၀၆။ အမေ့ပါးကသနပ်ခါး ၀၇။ နွေ ၀၈။ ချစ်မေမေ ၀၉။ မျက်နှာဝိုင်း ၁၀။ စေတီဟောင်းမှာဆုံရအောင် ၁၁။ သစ္စာမဲ့ပိတောက်
November 15, 2011 Snuo Mwoani အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) တွံတေးသိန်းတန် Myanmar Oldie Albums Leaveacomment
တွံတေးသိန်းတန် – မိန်းမလှမာယာ
၀၁။ ကျောင်းနေတုန်းက မြသည်းညှာ ၀၂။ မသည်းစိမ်း ၀၃။ မြန်မာ့စည်ဗြော ၀၄။ သဇင်ရယ် နှင်းရယ် လမင်းရယ် ၀၅။ မိန်းမလှမာယာ ၀၆။ ခံစားမှာလား စံစားမှာလား ၀၇။ မိဘဂုဏ်ရည် ၀၈။ မလွမ်းချင်ဘူး ၀၉။ ရင်ခွင်သစ်ချစ်သူ ၁၀။ အင်္ဂုလိသုဘဒ္ဒါ ၁၁။ ပစ်တိုင်းထောင်အသည်း ၁၂။ နင်လားဟဲ့ လောကဓိ
June 19, 2010 Snuo Mwoani အခွေ (တကိုယ်တော်) တွံတေးသိန်းတန် 1 Comment
တွံတေးသိန်းတန် – ငွေကျော့
၀၁။ ငွေကျော့ (၂)ပြား ၀၂။ အသည်းပျောက်လို့ ငရဲရောက်သူ ၀၃။ စနေမိုးသီး ၀၄။ မျှော်ကိုးရ လွမ်းရက်ရှည်တယ် ၀၅။ မြပုလဲသွယ် ၀၆။ ရွက်ကြွေလမ်းက မေတ္တာသမား ၀၇။ သူလည်းသူ့လိုပဲ ၀၈။ ဘ၀၀ဋ်ကြွေး ၀၉။ ကံမွဲသူအမေအို ၁၀။ ငယ်ကျွမ်းမြဒါလီ ၁၁။ စိတ္တဇမေတ္တာသမား
June 19, 2010 Snuo Mwoani အခွေ (တကိုယ်တော်) တွံတေးသိန်းတန် Leaveacomment
တွံတေးသိန်းတန် – တောလုံမေ
၀၁။ ပန်ချင်တယ်ခရေဖူး ၀၂။ ကျေးတောသူ ၀၃။ တခါကကျေးတောသူ ၀၄။ တောလုံမေ ၀၅။ မြို့ သူမဟုတ်ကြောင်းပြောပြပါ ၀၆။ မိငယ် ၀၇။ လေးနွယ်(၂)ပြား ၀၈။ ရွှေရင်ဖုံးတုံ့မဖုံးတုံ့ ၀၉။ ပ၀ါပါး
June 14, 2010 Snuo Mwoani အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) တွံတေးသိန်းတန် Leaveacomment
တွံတေးသိန်းတန် – ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်
၀၁။ ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ် ၀၂။ ချစ်မီးလေး ၀၃။ နှမလက်လျှော့စေချင်ပါ ၀၄။ စိမ်းဧရကီ မြမြစိမ်း ၀၅။ နွဲ့ဆိုးလေးတို့ ရာဇ၀င် ၀၆။ လွမ်းလောက်လို့လား ၀၇။ ဂွမ်းပုံရေ လုံအောင်ပုန်း ၀၈။ ငယ်ကျောင်းတော် သူငယ်ချင်း ၀၉။ ပိတောက်မလေး ၁၀။ ခရေဦးနဲ့ လွမ်းစေတီ ၁၁။ ရွှေရတုအလွမ်း ၁၂။ ချယ်ရီမေလေး နန်းသက်ဝေ
June 13, 2010 Snuo Mwoani အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) တွံတေးသိန်းတန်2Comments
၀၁။ ဂွတ်ရှယ် ၀၂။ ငှက်ခါးမလေးပြန်လာပါ ၀၃။ ထမင်းဆီဆမ်းရွှေလင်ပန်း ၀၄။ လူရှင်းတုန်းအဖြေပေးပါ ၀၅။ မိန်းမဆိုးအမုန်း ၀၆။ မြသီတာအကြိုထောက်ပေမယ့် ၀၇။ မျက်နှာဝိုင်း ၀၈။ ဆောင်းနှင်းမြူနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူ ၀၉။ စောင်းသံတိတ်မှအိပ်ပါကွယ် ၁၀။ စိမ်းနေဦးတော့မောင့်ပန်းနွယ် ၁၁။ ရွှေလက်နဲ့ခေါ်ရမှာလား ၁၂။ သားရှင်ပြုအလှူပွဲ
February 24, 2009 Snuo Mwoani အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) တွံတေးသိန်းတန် Myanmar Artist3Comments
၀၁။ ပန်းနွယ်ကစိမ်း ၀၂။ စိမ်းသရဖူစိမ်း ၀၃။ မေတ္တာမီးအိမ် ၀၄။ နှမလက်လျှော့နေလေတော့ ၀၅။ လေးဆယ်ကျော်အချစ် ၀၆။ အမေ့ပါးကသနပ်ခါး ၀၇။ အချစ်တစ်ပွဲစစ်ပွဲတစ်ရာ ၀၈။ ချယ်ရီလက်ဆောင်ပေးသူ ၀၉။ ချစ်သည်းဘယ်ခါရှိပါ့မယ် ၁၀။ ချစ်ရက်ရှည်ရှည်အင်းလျားမြေ
February 24, 2009 Snuo Mwoani အဆိုတော် (ကျား) တွံတေးသိန်းတန် Myanmar Artist 8 Comments
၁။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦး – ကိုမင်းနောင် ၂။ တက္ကသိုလ်ကျေင်းတော်သားကြီးသို့ - တင်တင်လှ ၃။ တက္ကသိုလ်မှဝေတဲ့နှင်း – ခင်မောင်ကြီး ၄။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းကငွေလမင်း – ချိုပြုံး ၅။ တက္ကသိုလ်နန်း – သန်းသန်းရှိန် ၆။ မြကျွန်းညိုညို – အဖွဲ့၇။ ပန်းတိုင်းပွင့်လှိုင်ကံ့ကော်မြိုင် – အဖွဲ့၈။ တေးဆိုငှက်ငယ်နှင့်ရနံ့ ကြွယ် – အဖွဲ့၉။ မြရိပ်ဝန်းကိုလွမ်းပါသည် – ခင်ခင် ၁၀။ ချစ်ရက်ရှည်ရှည်အင်းရားမြေ – တွံတေးသိန်းတန် ၁၁။ အင်းယားအမှာပုံတော် – စန္ဒရားချစ်ဆွေ
February 24, 2009 mmsong အခွေ (အများ) ကိုမင်းနောင် ခင်မောင်ကြီး တင်တင်လှ တွံတေးသိန်းတန် ချိုပြုံး သန်းသန်းရှိန် Myanmar Oldie Albums
တွံတေးသိန်းတန် – မောင့်မမပန်းနွယ်
၀၁။ မောင့်ကိုညာရင် ငရဲကြိးလိမ့်မယ် ၀၂။ ပန်းကောက်သမား ၀၃။ မောင့်မမပန်းနွယ် ၀၄။ သီတင်းကျွတ်ရင်မင်္ဂလာဆောင်မယ် ၀၅။ မီငယ် ၀၆။ ပြည်တန်တဲ့မိဖုရား ၀၇။ ပန်းပန်တတ်တဲ့အရွယ် ၀၈။ ပ၀ါပါး ၀၉။ အချစ်ဟောင်းနဲ့ဆောင်းပုံပြင် ၁၀။ မင်းသမီး
February 20, 2009 Snuo Mwoani အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) တွံတေးသိန်းတန် Myanmar Artist2Comments
၁။ Track 1 ၂။ Track2၃။ Track3၄။ Track4၅။ Track5၆။ Track6………. ………. ၁၆။Track 16
November 8, 2008 algebra အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) တွံတေးသိန်းတန်2Comments